Maxkamada ciidamada Puntland oo dil toogasho ah ku xukuntay shan xubnood oo katirsan Al-Shabaab - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMaxkamada ciidamada Puntland oo dil toogasho ah ku xukuntay shan xubnood oo katirsan Al-Shabaab
May 27, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Maxkamada ciidamada Puntland oo dil toogasho ah ku xukuntay shan xubnood oo katirsan Al-Shabaab. [Xigashada Sawirka: Puntlandi]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Maxkamada ciidamada Puntland ee gudaha magaalo xeebeedka Boosaaso ayaa maanta oo Sabti ah dil toogasho ah ku xukuntay shan xubnood oo katirsan Al-Shabaab.
Cabdifataax Xaaji Aadan, guddoomiyaha maxkamada ciidamada Puntland ayaa iclaamiyay go’aanka kama dambaysta ah ee maxkamada.
Shanta nin ayaa ciidamada ammaanka Puntland ku qabteen gudaha Boosaaso bartamihii bishii April kadib iyaga oo isku dayayay in ay qarxiyaan gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa, sida ay sheegeen ilo-wareedyo amaanka ah.
Intii lagu guda jiray bilihii dhawaa ee lasoo dhaafay, Boosaaso ayaa la kulantay mowjado weeraro dhimasho leh oo lala eegtay masuuliyiin katirsan dowladda iyo dad shacab ah, waxaana masuuliyada weeraradaas sheegtay ururada argagixisada sida Al-Shabaab iyo Daacish.
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Arbaco ah dadweynaha magaalada Gaalkacyo kala qaybgalay salaada Ciidul Fidriga oo lagu oogay garoonka kubada cagta ee Cawaale. Madaxweynaha ayaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan [...]